Dowladda Maraykanka oo uga digtay musuqmaasuqa Soomaalida Maraykanka ah -
Dowladda Maraykanka oo uga digtay musuqmaasuqa Soomaalida Maraykanka ah
Dowladda Maraykanka ayaa soo saartay sharci digniin ah oo ay la beegsanayaan muwaadiniinta Soomaalida Maraykanka ah ee ka qeybgalaysa doorashooyinka dalka Soomaaliya in ay ku lug yeeshaan musuqmaasuqa xooga leh ee ka socda dalka Soomaaliya.
Fariin iyo dhambaal qoraal kooban ah oo uu soo dhigay barta Twitter-ka Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Stephen M. Schwartz ayaa shaaciyey in sharciga Mareykanka uu dhigayo in muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan meel ka baxsan dalka lagu ciqaabi karo haddii ay ku lug yeeshaan musuq maasuqa ka Jira Soomaaliya.
ilaa iyo hadda lama sheegin heerka ay gaarsiisan tahay ciqaabta ay la kulmi karaan muwaadiniinta Soomaalida Maraykanka ah ee iyagu kamid ah ama la shaqeeya dowladda Soomaaliya haddii lagu helo dambiyo la xiriira musuqmaasuq.
Waxaa maalinba maalinta ka danbeysa sii badanaya Soomaalida haysta dhalashada Maraykanka ama sharci Mareykan ah, balse asalkoodu yahay Soomaali ee iyagu katirsan ama ka mid ah labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya iyo weliba musharixiinta doorashada Madaxweynaha dalka Soomaaliya.
Dalka Maraykanka ayaa ka mid ah dalalka aad u daneeya siyaasada Soomaaliya isla markaana ka mid ah beesha caalamka ee dhaqaalaha iyo waliba taageerada la garabtaagan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Maraykanka ayaa kamid ah dowladdaha beesha caalamka ah ee walaaca ka muujiyay tirade cusub ee lagu daray xildhibaanada Aqalka Sare iyo fasaxida qaar ka tirsan kuraasta Aqalka Hoose ee ay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban diideen.
Dalka Soomaaliya ayaa kaalinta koowaad ka gashay musuq maasuqa. Hay’adda Transparency International liiska ay soo saarto sannad walba ee ku saabsan dalalka ugu musuqa badan dunida ayaa waxaa kaalinta 1aad kaga jira liiskaas dalka Soomaaliya. Liiskan sannadlaha ah ayaa dhinacyada uu qiimaynta ka eego waxaa ka mid ah laaluushka iyo dadka madaxda ah ama maamula xukuumadaha oo aan lagu ciqaabin musuq maasuqa ay sameeyaan ama ku lug leeyihiin.
Haddaba digniintan ay dowladda Maraykanku ka soo saartay musuqmaasuqa la xiriira Soomaalida Maraykanka ah ayaa ah talaabo la is orankaro waxay xakameyn kartaa musuqmaasuqa xowliga ku socda ee aad iyo aadka u saameeyay siyaasadda dalka Soomaaliya.
Related Items:Featured, local, News, Somali immigrants, Somali Minneapolis, Somali News